Management Mabasa muDubai C-Level kwete chete maExpats
Fomu rinotumirwa zvinobudirira. Ndatenda!
Simudzira chimiro chako kuti uve ne100%
$ 4.99 Kusimudzira
$ 9.99 Yakazara Mbiri Kusimudzira
* $ 4.99 Zvese zvakasununguka mumahara + Yedu HR Manager uye Director vachange vachitarisa kuCV yako uye tinoita kuti CV yako ioneke kuDubai, nhengo dzeAU se premium expat.
* $ 9.99 Tinotumira CV yakazara pane yedu portal saka, maH maneja eVatariri uye maDirector vanozo tarisa CV yako uye tichaita chokwadi kuti CV yako ichave yekutanga kune UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait nedzimwe nyika dzakawanda.
Chinyorwa chinoendeswa zvinobudirira. Ndatenda!
Tumira Chinyorwa & Cheers kuDubai
Urikuda Dubai here? - Iye zvino wave nemukana wekunyora chinyorwa kana pfupi kapepa uye chinyorwa refu kuUnited Arab Emirates.
Nyora chinyorwa chako mazwi asina magumo! Tumira yakanaka vibes!*
Makiyi ezvinyorwa zvako:
Yakaparadzaniswa neComma - Dubai, Kambani yangu, Mararamiro,
* Ehe, iwe unogona kuwedzera chinongedzo kune yako webhusaiti!
* Chinyorwa chako chinozoiswa pane yedu webhusaiti saka, Bhizinesi mamaneja uye vamwe vanhu vanozozviona.
* Chinyorwa chinofanirwa kuve nemhando shoma yemashoko e500 asi iyo link ndeye Dofollow!
Premium SEO Service ye Middle East!
Donhedza mafaira pano kana kudzvanya kusarudza
* Mahara! Isu tinotumira chinyorwa / pfupi pfupi inorarama pane yedu "NEW JOINERS" chikamu.
* $ 9.99 Zvese zvakasununguka mumahara + Wekushambadzira maneja wedu achave nekutarisa zvemukati menyu uye tichava nechokwadi chekuti chinyorwa chako uye chinongedzo chiri kuoneka kuDubai, nhengo dzeAUE uye chinyorwa chako chinogona kuve nemazwi anosvika ku2,000.
* $ 29.99 Isu tinotumira chinyorwa chako uye dhizaini zvachose kune SEO zvinangwa. Nekudaro, Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo marobhoti achave nekutarisa zvemukati wako nenzira yakanaka uye tichave nechokwadi kuti webhusaiti yako inogutsikana zvikuru kuAEE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, nedzimwe nyika dzeEast East. (* Mazwi Asingagumi)
Tumira Chinyorwa CheMahara!
$ 9.99 inoonekwa kuDubai, kusvika kumashoko e2,000!
$ 29.99 Chinyorwa dhizaini Zvakakwana kune SEO zvinangwa mu Middle East.
Tumira Chinyorwa & Batanidza!
Management Mabasa muDubai Chinongedzo cheC-Chikamu Chekuita
DUBAI BLOG - Zvose nezveKushanda uye Kurarama muUAE
Nursing mabasa muDubai uye Abu Dhabi
Dai 6, 2018
Dubai blog for new expats mu Dubai
Dai 16, 2018
Dzivirira Kupinda Kwakapetwa
Tumidzira CV Yako & Zviunze pachako muhunyanzvi mune dzakasiyana siyana mamiriro.
Professional Positions [Zviripo & Zvinodiwa]
Chii Uri Kutsvaga Munzvimbo Itsva?
Nyora Zvakaitika Pako kana Copy CV apa!
Mazwi akakosha ekuwana iwe: Paradzanisa iyo tag ne comma!
Ndiri kutsvaga kuzova Expat
Management jobs in Dubai kwete chete nokuda kwekutsvaga. I Dubai City Company ikozvino kubatsira vatungamiri kuiswa muUAE. Boka redu rakatungamira gwara rose remabasa kuDubai kwemaneja. Kunyanya kune vakuru vevatariri vakuru. Saka kana iwe uchitsvaga rakakwana basa muUnited Arab Emirates. Tarisa matipi mashoma, uye tsvaga kuti ndeipi nzvimbo yakanyanya kunaka nekuda kwekuwana basa rokurota kune dzimwe nyika.
Tanyora pasi mabasa akanaka aunogona kuwana muUAE. Uye zvechokwadi, zvakanakisisa ndezvazvo CEO kana vatungamiri veMatungamiri emabasa. Uye gwara redu rekambani rinodzidzisa nzira yekuwana iyoyo mhando yemabasa inopa. Pane rimwe divi, ibasa rorudzii iro?. Uye maitiro ekugadzirisa mafungiro akakwana kune aya mabasa anopa? Dubai City Company iri kubatsira vatsva kutsvaga basa. Wadii kuverenga vatungamiri vedu. Unogona kuwana mamwe makambani akanaka pasi apa. Vari kuita mabasa akanaka muDhailand neGulf Countries.
Kambani yedu iri kutarisa inowanzo taura nayo kukubatsira iwe kuve maneja wepamusoro muUAE. Kune rimwe divi, isu tiri kubatsira vari kudzingwa kuitira kuti vawane basa nekukurumidza ivo vava kufunga. Nenhungamiro iyi, uchaita tsvaka ruzivo rwakanaka pamusoro pekushandira. Panguva iyo Middle East neGulf nyika ndey kumusoro kunzvimbo yevanotsvaka basa. Kunyanya nevarume vakadzidziswa-zvakanaka vane MBA uye bhizinesi redzidziso. Saka tarisa pazasi, chii iwe unogona kuita negwara redu.
Kuve nenzvimbo yepamusoro inogara iri nani .. Icho chinzvimbo cheMukuru chinzvimbo cheshungu, kwete basa. Iko zvirokwazvo kukurukurirana kuti uve maneja wepamusoro kana kuti kwete? Mazhinji mamaneja epakati wepakati anosarudza kuti kutsvaga basa kumushandi wepamusoro mutevedzeril. Basa re CEO rakanaka kune vanhu vane MBA dzidzo uye kune avo vane PhD. Nemhaka yemakambani makuru kana pakudukuka kwakasimba. Zvechokwadi vose zvavo vane CEO. Saka ikambani yakakura-soro inotarisira kune vashandi vakuru vakuru. Izvo hazvisi zvachose chokwadi mune iyi bhajibhu yeA Dubai, uye vanhu havazivi kuti ndiani achava mutungamiri akanaka.
Semuenzaniso, vazhinji vanoenda kune dzimwe nyika kuMiddle East vanoongorora uye chengeta-mu mubhadharo we CEO ku Dubai. Yakakura muhoro inogara iri nani here? Ehe saizvozvo kuri sezvo iwe uchiita zvirokwazvo nhaurirano yekuve uine kana zvasvika pakusarudza kana kutsvaga basa pakambani hombe kana padiki kana pakati svikiro sangano. Iyo CEO basa rakaoma kusvika, rakaderera pane 5% yevanhu vanokwanisa kuita izvi zviitwe.
Icho hachisi chokwadi chenyika yose pamusoro pechipato cheGweta. Uye kune zvakanakira uye zvisingabatsiri kuti zvisarudze kubva kune mukoti vashandi kusvika kuMatunhu. Maawa marefu ebasa, akakosha mumuviri uye huchenjeri hwemagariro hunodiwa. Saka havasi vanhu vese vanogona kuve mukuru maneja. Kunyanya kana vasiri kuva nerunyoro rakanyorwa rakanyora. Kune ushingi uye kushushikana kunoda nzvimbo iyi yakasiyana. Vakawanda vevanhu vari kukwira kusvika kumajeri emapurisa.
Nha. 1 Management Jobs mu Dubai the Positives
Basa rehutungamiri, chaizvoizvo, inonyanya mumakambani makuru kubva Abu Dhabi kusvika ku Dubai. Uye vazhinji vavo varipo nokuda kwechikonzero. Nokubudirira kubudirira uye kukura, vatungamiriri vepakati. Kuwana basa sevatungamiriri vakuru. Uye nekambani iyi duku inova huru pane imwe nguva. Uye zvino mameneja vanowana zvakasiyana zvikomborero uye zvinowanikwa mune zvekuchengetedzwa kwemabasa.
I Dubai City Company ine tsanangudzo mutungamiri weAlgeria expats. Isu takaisa mashoma positives ekufunga nezve kutsvaga basa semaneja mune chinzvimbo chemaneja wepamusoro. Iwo makuru positives emaneja ekutarisira mabasa muDubai ari kuwana ruzivo rwepamusoro-zvo. Iwe unogona kuishandisa iyo chiitiko chako chakanaka chekutsvaga basa rinotevera.
Izvo zvipo zvakanyanya pamusoro pemabasa ekufambisa muDhaibha zvakanaka. Uye zvizhinji zvezvikoro zvakanaka uye rakarongeka zvakanaka mararamiro ega sechitsi. Saka, kana iwe uchitsvaga iro mhando rebasa iwe unofanirwa kukwanisa kugamuchira yakawanda yemabhonasi. SaMukuru, iwe uchawana awa yakareba yekushanda asi iwe unokwanisa kubata zvakanaka kubatana. Kubva pamabasa ekutanga mabasa ekuvhiya akadai hoteli basa kusvika pa MBA basa muUAE. Zvose zvavo muchakwanisa kuwana Mutariri weMiddle East.
No.2 Mutungamiriri Sechimiro se Mutungamiri mu Dubai
Kupinda kambani huru yebasa rekutungamirira, somuenzaniso, Airport jobs in Abu Dhabi uye Dubai. Zvechokwadi kufanana nekuva chikamu chekushanda kukuru kwekushanda kwakatsungirira kuedzwa kwenguva. Muzvokwadi kuti awane basa rokutarisira mu Dubai. Zvinotora nguva yakareba. Nokuda kwechikonzero ichi, timu yedu ine inotungamirira vatorwa vatsva. Vakawanda vevashandi vakuru vakuru vanowanzogadzwa kwenguva yakareba kare.
Nechinangwa chekuva maneja muDubai. Iwe unofanirwa kusvika kune mamwe maitiro. Uye zvinhu zvinogonesa kuti uzive chaizvo iro basa rako, kuti unokwanisa sei kukwanisa basa mumutoro wako uye nzira dzakajeka dzekusimudzira uye kumutsa mushure mekunge iwe uchifamba nepamukova. Kunyangwe urongwa hwemhando iyi haisi nzira yakarurama yevanhu vose, kana iwe uchida basa ine pfungwa yakanyanya yekusimudzira, inotsanangurwa zvakajeka uye nzira dzakarongwa dzekufambira mberi, ipapo makambani makuru Iva izvi mumasasa.
Uyewo, expat, mukadzi iye zvino ava kuwana mabasa mu Dubai. Hazvina mhosva kuti mararamiro ako. Iwe zvechokwadi uchava nemukana mukuru we kuwana basa muMiddle East.
Nha. 3 Makomborero Okuva Mutungamiriri muUAE
Kazhinji, makambani makuru anowanzo kusimudzira mari yezviwanikwa. Saka pane mukana mukuru wevatariri vatsva vepakati-kati. The main Zvikomborero zvekuva maneja muUAE kuratidzwa kwepasi rose. Nekuti zvirinani makambani epasi rese ari kupa rubatsiro rwakadai seinishuwarenzi yehutano. Zvakawanda zvakawedzera uye zvinofarira zvemukati kudzidziswa kwevanhu vatsva.
Somutungamiriri mukuru, iwe uchadaro gamuchira mari yekufambisa kana Uber. Zvinopfuura zvidzidzo zvekudzidzisa, uye zvimwe zvakawanda zvinobatsira. Izvi ndezvokuti makambani makuru anowanzova nemari yakawanda pane zviduku zviduku. Nokudaro izvi mupfungwa, makambani anozviita zviri nyore kuvashandi vatsva kuva maneja. Kune rimwe divi, iwe haudi kubhadhara mari yekubhadhara akawedzera mabhenefiti mapaketi.
Zvechokwadi, izvi zvinongoitika kana iwe uchitanga kushandisa nzvimbo yako. Pane zvakawanda zviripo zvinobatsira kune vatariri vemabhengi muUAE. Pasinei nekambani yekambani uye chii chinenge chiri kunze kana mukati chinopedzisa kupinda hupenyu hwako nokuda kwemabasa eC-level. Tinofanira kuyeuka kuti mamaneja muUSA. Zvirokwazvo anogona kuwana basa kune dzimwe nzvimbo, semuenzaniso, Saudi Arabia, uye Qatar. Saka kubva pawakava chigaro muDubai kana Abu Dhabi. The Nyika ichavhurirwa iwe.
Kwete .4 Zvimwe Zvingaita Kuti Uite Basa Rokuchinja
Kunyange zvazvo basa rako ringave riri nemakambani chaiwo mune kambani huru. Kutsvaga basa se CEO kana Mutariri Mukuru zvinogona kutora nguva. Muchokwadi, zviri nyore kwazvo kuchinja zvinzvimbo kubva paManagement level. Kune rimwe divi vazhinji vevakuru vepakati vakatarisa ongorora nzvimbo itsva dzebasa pasina kusiya kambani zvachose. Nezve izvi mupfungwa, iwe semushandi iwe uchave nezvimwe zvakawanda mukana wekuchinja kwebasa.
Kuti ave CEO, iwe unogona kubva pakuva mutengesi mukuru wekutengesa kuti uve mutariri weprojekiti, ipapo basa mutungamiriri uye kusvika kumabasa eC- Level. Kana kunyange iwe unogona kutanga semufananidzo wekugadzira uye kumuka achishanda semushambadziri mukuru. Iwe unogona kunge uchiri kuda kuvhima zvishoma kuti uchinje basa. Uye shanda nesimba panzvimbo yepamusoro kwemakore mazhinji.
Nekuda kwekukodzera shanduko yebasa iwe yaunoda. Muzviitiko zvakawanda zvinotora zvakatenderedza mashoma 10 makore kusvika. Asi zvirokwazvo isanganiswa kana iwe uchitove uchishandira sangano rakanaka. Kupfuura kukudziridzwa manejimendi jobs in Dubai. Icho chinhu chimwe chinhu chakanyanya maneja chinofanirwa kunetseka nezvacho. Kune rimwe divi, mabasa ekutarisira muDubai akanyanya kudarika mabasa akareruka.
Kwete .5 New Companies uye startups
Kushandira kambani hombe haisi mese kupisa kwezuva uye muraraungu wemvura. Nekudaro, kushandira makambani ekutanga ane zvawo zvakanakira. Semuyenzaniso, sezvo uchifambisa kambani yeDhailand kubva pakatanga-up kusvika kumabhizimisi akanaka. Iwe uchava nekutonga kwakakwana semutungamiri kuti sei kambani inofambira mberi. Chii chiri kufambira mberi kwebazi rimwe nerimwe? Uye kunyangwe kuwanda kwevashandi vako vanoita mwedzi wega wega.
Paunenge uchiedzwa kupinda mukambani huru yemarudzi akawanda. Iwe unofanirwa kufunga nezvemakambani madiki aya. Kana kunyange masangano anotangisa kana makambani anotsigira mari yekudyara. Iyo yakanaka kambani nokuda kwekuwana basa neKutanga makambani semutungamiri ndiye Angel.co. Iyi kambani iri kushandira pasi pose !.
Nha. 6 C-Level Maitiro akaitika zvishoma nezvishoma
Kutarisira mberi kuva C-Level executive ?. Kushandira kambani huru yakanaka. Pamusoro pezvakaipa, kubva pakati nepakati kusvika kune C-level ndiyo nzira yakareba. Nekuti yeC-Level vatongi Shanduko dzakanyanya kureba. Iwe unofanirwa kuve nemoyo murefu, dzimwe sarudzo dziri kutora kusvika kunguva ye3 Makore. Kunyangwe nevamwe makambani muDubai. Ndichine nzira refu mberi kwekutsvaga kana vashandi vekumba kuti vatange pahutungamiri muUAE.
Kunyangwe kana kambani yaunoshandira yakavhurirwa mazano matsva. Zvakadaro, iwe unofanirwa kuve nezvinangwa zvenguva yakareba. Zvakanyanya basa rinofambira mberi rakanaka uye inobvumikisa HR director wedhipatimendi mabhodhi kudhira kune imwe modhi. Uye uteedzere newe kuti akutore iwe pane idzva zano. Uye chinja chinzvimbo chako yeC-Level executive level, chiitiko chitsva chechigaro chitsva chingatora nguva yakawanda. Zvizhinji zvezvitsva zvitsva muUnited Emirates vachada kusiya mutsara wavo kambani. Asi izvi zvinotora nguva yakawanda, vanoshandira huwandu hwe5 kusvika kune 7 makore.
Nekudaro, izvi zvinogona iva akatwasuka uye nyore kune kambani diki pane yakakura. Iwe unofanirwa kuyeuka kuti sezvo kambani yanga yakatenderedza kwenguva yakati, ichave nenzira yayo yekuita kuti zvinhu zviitwe. Uyezve kungomhanyisa maitiro ese aunokwanisa tarisa kufamba mumabvunzurudzo mu Dubai.
Nha. Vatungamiri veXXUMUMI Mazano Ako Kubudirira Kwako
Zvakanaka, vatungamiri nguva dzose vanotarisira kuve nekukurudzira. Paunenge uchikomberedza iwe vanhu vakanaka vanobva kumativi ose enyika. Iyo imwe yeiyo activencer inobatsira iwe kutora kune kubudirira kwako. Nyaya huru ndeyako kukurudzira kubudirira uye mufaro. Iwe haamboziva kuti zvakaoma sei kuti ichengetedze basa-hupenyu hwakakwana mune imwe nhanho. Padivi risina kunaka kwete maneja wese muDubai anogona kuve vakatsunga kuti vawane CEO mabasa. Vamwe vanhu vanoshanda nguva yakareba vaine timu yekusagadzikana. Uye ivo vari kubhadhara mutengo wakakura. Nekuti urwu rudzi rwehunhu inounza pasi kunaka kwebasa rako rebasa.
Kubva paunotanga kushanda nevanhu vane mafungire akaipa. Zvechokwadi ivai mumaawa akawanda zvisinei kuti zvakaoma sei kushanda. Asi iwe semaneja kuDubai iwe unofanirwa kuve peseropa uye rako rako. Sezvazviri, izvo zvinokanganisa mikana yako yekukwira kumusoro mukati mekambani. Unganidzai mushumo wakanaka nechikwata. Vaitei kuti vawedzere tsika inoshanda uye kushanda nesimba nekuti zvakakosha. Zvirokwazvo, kana uchiita homuweki yako. Chikwata chako kana dhipatimendi riri pasi pemutariri wako. Ndichakusimudza uye kwete kukuunza pasi chero nguva.
Pane zvakawanda zviripo mabasa mu Dubai uye Abu Dhabi. Kufuridzira kunogona zvirokwazvo kukubatsira iwe kubata basa rakakura. Kugadzirisa kubudirira kwako pachako kuri muchokwadi Zvese zvekurudzira mumwe munhu kuti akuhaye.
Mhedziso yeMabasa eKubata ku Dubai
Ok, ngatisipedzise, ​​mabasa ekufambisa ku Dubai. Hazvisi nyore kuwana. Vazhinji vevanotsvaka basa vanofanira kuva neunyanzvi hwakanaka. Uye yemabasa eC-Level sezvakaita Operation Manager, CEO, Management Directors nzvimbo. Kubvunzana kwakanyanya kunetsa. Uye nekushandura nharaunda kwainge kusati kwanyanya kuve nyore. Kunyangwe kushandura nyika kunogona kuve kwakaoma kwazvo basa kuti haugone kuve wakakwanisa nenzira yakajeka. Kunyanya kubva kuEurope or Asia sokutsvaga basa kuMiddle East.
Saka, zviri nani kutanga mukati kupinda-level positions jobs. Wobva zvishoma nezvishoma uchienda kumberi kwenzvimbo yemanaja wepakati. Nenzira iyi ichave yakachengetedzeka kwazvo kwauri. Ehe kumakambani akaita seGoogle ne Facebook. Kazhinji kutaura, mushure iwe wapfuura mabvunzurudzo maitiro, uye kana iwe uchazove vakagadzirirwa basa rakadaro rakanaka. Iwe uchaita yakawanda mari. Asi kusvika ikoko kwakaoma, ndicho chikonzero vanhu vazhinji vanogara mukati shanda kusvikira vasimudzirwa.
Asi Dubai City Kambani anogara achikurudzira vatorwa. Tinoda kuti iwe uisirwe iyo yakanakisa mabasa inopihwa uye yakanakisa manejimendi mabasa muDubai. Ichi chikonzero nei tichigara tichivandudza yedu blog positi muAEE. Uye neichi mupfungwa, tiri kuedza kukubatsira iwe kuti uve anofara mushandi mu Middle East. Kune rumwe rutivi, usakanganwa kuti zvakare makambani mukati Saudi Arabia kuhaya kushandiswa.
Uyezve Tarisa Pa: Multilanguage Guides for Expats
Dubai City Company izvozvi kupa magwara akanaka muDubai. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Dubai expats. Saka, uine izvi mupfungwa, ikozvino unogona kuwana vatungamiriri, matipi uye basa muUnited Arab Emirates nemutauro wako.
Indonesian Expats mu Dubai
Vashandi vanoedza kuUzbekistan
Vanhu vokuPoland muDhailand
Russian Expats muDhailand
Vashandi veSpanish ku Dubai
Kugamuchirwa, ndinokutendai nekushanyira webhusaiti yedu uye nekuve mushandisi mutsva wemabasa edu anoshamisa.
Iwe unofarira Dubai Kambani?
Kutsvaga Mabasa muDubai?
Kugamuchirwa, kuDubai City Kambani.
Takatsunga kudaro kukubatsira kushamwaridzana nevamwe expats uye kuwana basa muUnited Emirates.
Wedu chete mubvunzo ndewe, iwe ungatibetsera isu Kukura here?
Tsvaga muDubai Kambani
Nezve Dubai City Company
Dubai City kambani
Isu tiri vamwe veakanakisa Nharaunda dzeVatsigiri muMiddle East. Yedu yenharaunda portal kubatsira ne kuunganidza uye mudonzvo. Tiri kubatsira expats kubva kumativi ese epasi, nekushandisa masevhisi edu uye mamwe mabasa webhusaiti muDubai.
Kutsvaga hope basa muUAE.
Kupiwa aya mapoinzi, kana iwe uripo Nyama uye kutsvaga kambani yekufambisa zvekare muDubai. Edza basa redu uye Nyoresa nhoroondo yako.
Isu takazivikanwa sekambani yepamusoro ye100 yemabhizimusi muUnited Arab Emirates. Isu tiri yepamusoro pesheni mukati memagariro enhau.
Isu takakwanisa kudarika vashanyi ve30m muAEE neIndia. Zvakare, chinangwa chedu chiri kubatsira kubva kumudiki kusvika kune vakuru vevatevedzeri kuwana basa muMiddle East.
Sezvinobvumwa, iwe unofanirwa kufunga nesangano redu mune rako kutsvaga basa.
Nzira yekuwana sei basa mu Dubai?
Kune mapeji mashoma anokubatsira kuwana basa!
Pakapinda Tumirazve mabasa portal nzvimbo mu UAE
Connect with yepamusoro Vashandisi muDubai
Tumira CV makambani ekushanda muDubai
Nyorera kuna Mahofisi Ekuchengetedza ku Dubai
Isu tiri kunyorera Mabasa mu Dubai 2018
funga Hurumende Career muDhailand
Basa muDubai WhatsApp Group
Iva nekutarisa tsvagurudzo yeBasa muUSA
Tumira CV Yemahara! 📁
Fomu rinotumirwa zvinobudirira uye rakatumirwa pawebsite yedu. Ndatenda!
Iye zvino: Nyoresa Yako Yakawedzerwa CV 100% Mahara!
Ruzivo kubva kuchikamu ichi rwunotumirwa Kurarama pane yedu Webhusaiti!
Zvizivise Iwe Nezve Nenzira Yakakodzera! Unogona kuwedzera CV apa! - (Ctrl + C, Ctrl + V)*
Unyanzvi & Kugadziriswa - Yakaparadzaniswa neComma (maneja, mutengesi, mainjiniya)*
Aya ndiwo mazwi ako akakosha padhayeti, ndomabatirwo awakaunganidzwa newe kubva kuGoogle
Yako Yenyanzvi Basa reMusoro weKutangisa Kupfupisa:*
Iri ndiro zita rako muprofile, ndosaka vateresi vakuwana iwe kubva kuGoogle
** Usakanganwa kuwedzera yako yekune ruzivo panguva yekutumira iyo Tsamba yekutanga Nhamba yefoni & Email.
* Yakakosha 350 mazwi mashoma! -Ino inzvimbo iyo iwe yaunofanira kutarisa zvakanyanya kuti uwane basa muDubai!
* Iwe unogona zvakare kuwedzera Link kune yako YakanongedzwaIn, Facebook mbiri kana yako pachako webhusaiti.
Tsamba Yekutanga Muenzaniso:
Vanodiwa Hr Mamaneja,
Zita rangu ndinonzi Katherine Sussman, uye pari zvino ndiri mubatanidzwa wevanyori veXYZ Kutsiva. Ndave ndichishanda senzira yekurairidza kwemakore matatu apfuura.
Ndiri kufarira kutama kubva kubasa rekunyorera mukambani hombe kuenda kuimba yekudyira yomukati isingabatsiri. Ini ndaimboshanda mukusimudzira kweABC Isiri Pundutso uye ndaizoda kuunza hunyanzvi hwangu hwazvino kune isingabatsiri. Ndinoziva iwe unoita rudzi urwu rwekushandira Zuva Risingabatsiri, uye ndingafarire kunzwa zvishoma nezve chako ruzivo mundima iyi. Ini ndinoda kuronga nguva yekusangana newe kuti uve neruzivo rwebvunzurudzo.
Ndakanamatira mutoo wangu wongororo yako. Kana iwe uine nguva yekukurukurirana kwenguva pfupi, ndapota ndiudze. Unogona kundibata kuburikidza neemail (ksussman@email.com) kana runhare (555-555-5555). Ndinotarisira kunzwa kubva kwauri. Ndotenda kwazvo.
Runhare pamwe nekodhi yenyika
Isa Photo Yako
Chinzvimbo chinyorera? SarudzaManeja MukurumenejaMabharaniRepresentativeHapana Ane ruzivo Anoshanda
Uri kunyorera here? SarudzaNguva izereChikamu Nguva
Dzidzo uye ruzivo rwekuziva
Diploma / Degree Zita
Koreji / University University
Mwaka Wekupedza Chikoro
Inodiwa Mubhadharo muUSA
Mwedzi / Gore
(semuenzaniso 3 mwedzi, 2 makore nezvimwewo)
Yemari Rino Mari muUS
Yazvino Kambani Dzvinyu
Ipfupi Yechiitiko Chako:*
Kavha Tsamba + Zvitupa
Ndiri kuva neVisa muAFA
Yemahara CV Kurodha
$ 9.99 CV yako ichaonekwa zvizere!
* Mahara! Isu tinonyora Sumo yekunyorera rarama pane yedu "NEW JOINERS" chikamu.
Tumira yakanaka vibes
Iye zvino: Deredza Nhamba yako Yefoni kuenda kuDubai Nharaunda 100% Mahara!
* Kanda foni yako kuDubai
Nhamba yako yeWhatsApp ichaiswa Kurarama pane yedu Webhusaiti!
Sei uchida kutumira WhatsApp Nhamba?*
WhatsApp Kushambadzira Musoro & WhatsApp Nhamba*
Mahara - Tumira WhatsApp Nhamba
Copyright © 2019 Dubai City Company. Kodzero dzose dzakachengetedzwa